Ahoana no hividianana backlinks PR9?
Ny habetsaky ny fifamoivoizana sy ny rohy ivelany dia zavatra roa izay tadiavin'ny tompon'ny tranonkala iray alohan'ny hamaranana ny fahombiazan'ny loharanon-tranonkalany. Ny loharanon'ny tranonkala tsy misy fitohizan'ny fifamoivoizana dia tsy azo raisina ho fahombiazana, ary tsy misy ny loharanon'ny tranonkala tsy misy fiovàna mivadika.
Andeha hojerentsika ny toe-javatra iray izay tsy maintsy misafidy eo amin'ny tranokalan'ny PR amin'ny seranan-tsambo tsy dia zero loatra ary ny tranokalan'ny PR miaraka amin'ireo mpitsidika isan'andro isan'andro 2000.Inona no hosafidinao? Azonao atao ny misafidy rohy dofollow avy amin'ny tranokalan'ny PR, na rohy feno nofolohin'ny tranokala PR. Mazava ho azy, sarotra ny misafidy ny roa amin'ireo karazana roa ireo. Raha handeha ho nofollow ianao dia hahazo fifamoivoizana an-taonany, ary raha handeha ho any dofollow ianao, dia hahazo ny fitombon'ny fizarana.
Tena ilaina ny mahatakatra ny fahasamihafana eo amin'ny rohy dofollow sy nofollow. Ny rohy miaraka amin'ny nofollow tag dia milaza ny motera fikarohana mba tsy hanaraka ny tranonkalanao amin'ny rohy iray na hanakana ny jirikan'ny rohy mikoriana mankany aminy. Ny rohy miaraka amin'ny dofollow tag, amin'ny fe-potoana,, dia lazao ny motera fikarohana mba hanaraka ny blôginao na hizara saka amin'ny pejy misy anao.
Mandreraka ny fanehoan-kevitra ao amin'ny bilaogy dofollow ny webmasters noho ny maha-zava-dehibe azy amin'ny fitadiavana fikarohana. Ny fitondran-tena toy izany dia nitarika ho amin'ny fanamarihana avo lenta momba ny spam. Izany no mahatonga ny bilaogy lehibe indrindra noforonina amin'izao androntsika izao.
Inona no fifamoivoizana mivezivezy lavitra kokoa sy ny fomba hahazoana azy roa?
Ny tombontsoa azo avy amin'ny fifamoivoizana
Tsy isalasalana fa ny fifamoivoizana no tena ilàna ny orinasa rehetra satria izany no fomba ahafahany miverina miverina amin'ny fampiasam-bola. Mametraha fanontaniana iray momba ny antony nampivoaranao ny orinasanao an-tserasera? Ny valiny dia ho mitovy ihany - hahazoana fitohanana bebe kokoa ary hampiova azy io amin'ny fandoavana lamandy. Ankoatra izany, ny fitomboan'ny fifamoivoizana dia manangana ny lazanao an-tserasera amin'ny aterineto ary manamafy ny fisian'ireo media sosialy. Azonao atao ny manatsara ny fifamoivoizanao amin'ny alalan'ny fampahalalam-baovao sosialy. Ary taorian'izay, ny fitomboan'ny fifamoivoizanao, ny fidiram-bolanao. Na izany aza dia misy ny tsy fahampian'ny fifamoivoizana - tsy maharitra izany.
Zava-misy fanta-daza izany fa ny famerenana eo anelanelan'ny fanentanana karazana fikarohana. Ny fampitomboana ny backlinks dia manome anao laharana ambony ao amin'ny valin'ny fikarohana izay manatsara ny varotrao. Ny avo indrindra azonao, dia mety ho fantatry ny mpanjifa kokoa ny momba ny marikao. Ny backlinks sasany dia afaka mametram-potoana mandrakizay, hanome anao amin'ny fitohanan'ny fifamoivoizana tsy misy farany. Na izany aza, na inona na inona ny hatsaran'ny rohy anananao, mety hanome loka na hanasazy ny tranokalanao i Google. Raha mahita ny rohy misy anao tsy hitovy amin'io rafitra io ianao dia hahazo sazy henjana izay mety hampidina ny fifamoivoizana sy ny varotrao.
Izany no antony, zava-dehibe ny miasa ho an'ny fifamoivoizana, fa tsy ho an'ny rindranasa mba hahazoana ny fitohanan'ny fifamoivoizana eo amin'ny tranokalanao, tsy maintsy manorina rohy ianao. Noho izany, raha te hiverina ianao, dia miasa amin'ny fifamoivoizana.
Loharanon-tranonkala toy ny Websiteoutlook, Alexa, Quantcast, ary ny momba ny tantsaha toy izany dia mety ho tsara ho an'ny fivoarana avo lenta avo lenta. Raha te hahita tranonkala toy ireny ianao, dia afaka manao fikarohana ao amin'ny tranokala ao amin'ny nichinao fotsiny. Mitifitra matetika ireo tranonkala ireo ny fitifiran'ny tranonkala, izany no mahatonga anao ho mora ny manokatra haingana ny tranokalanao. Omeo loharanon-kevitra amin'ny loharanom-baovao maromaro ny loharano web, ary hitohy hitombo ny isan'ireo mpilatsaka 24 ora Source .